अतीतको वि रासत भएपनि अब भारतीय गोर्खा सैनिक समय अनुकुल छैन : परराष्ट्र मन्त्रालय…हेर्नुहोस! – Nepal Online Khabar
अतीतको वि रासत भएपनि अब भारतीय गोर्खा सैनिक समय अनुकुल छैन : परराष्ट्र मन्त्रालय…हेर्नुहोस!
August 1, 2020 76
काठमाडौं । भारतीय गोर्खा सै,निकको भर्ती नेपालका लागि बि,रासत भएपनि हाल अएर समय अ,नुकुल नभएको पराष्ट्र मन्त्रालयले नि,ष्कर्ष निकालेको छ ।१९४७ मा भएको सम्झौता तत्कालीन समयमा उपयुक्त भएपनि हाल नि,रर्थक भएको भन्दै यसबारे स,मीक्षा गरिने परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन सम्झैताका केही प्रवधान संदिग्ध भएको नि,ष्कर्ष निकाल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सो सम्झैतामा नि,रर्थक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मुलत नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रि,पक्षीय सी,मामा भएको बि,वादका का,रण सो सम्झौता नि,रर्थक भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
समाचार एजेन्सी एएनआईलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएको छ- ‘भारतीय से,नामा गोर्खालीको भर्ती अ,तीतको वि,रासत हो । नेपाली युवाहरु विदेश जानको लागि यो पहिलो ढोका थियो । यसले अ,तीतमा समाजमा धेरै रोजगारीको सृजना गर्यो तर बदलिएको सन्दर्भमा केही प्रावधान संदिग्ध छन् । १९४७ को त्रि,पक्षीय सन्धि नि,रर्थक भएको छ ।’
भारतीय गोरखा सै,निक भर्तीबारे नेपालमा एउटा छलफलको बिषय बनेको छ । नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक भएका कारण कुनै देशका बि,रुद्ध नेपालीले बन्दुक चलाउन नहुने मान्यतामा अडिग रहनुपर्ने बताइदै आएको छ । तर भारतले चीनसँगको सी,मा वि,वादका घ,टनामा गोर्खा सैनिकलाइ प्रयोग गर्दै आएको छ । भर्खरै ल,द्दाखमा भएको चिनियाँ भारतीय सैनिकबीच भएको हिंसापछि भारतले बिदामा बसेका गोर्खा सैनिकहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
Prevप्रचण्ड र नेपालको ओलिविरुद्ध मोर्चा झनै कमजोर बन्दै,माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलिसंग एक्लै लड्ने भनेपछी तनावमा प्रचण्ड…हेर्नुहोस।
Nextतुलसीपुर उप-माहानगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख नागढुङ्गाबाट घु’ससहित प’क्राउ…हेर्नुहोस् ।
यस्तो बन्ने भयो एमाले मुख्यालय
सानै उमेरमा विवाह गरेकी रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान् को हुन् ? गर्भवती भएपछि छोडिन् सबै काम…..
यसरी बेसारको सेवन गर्नुहोस्, क्यान्सर देखि मधुमेहको लागि हुन्छ लाभदायक…पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् ।
राजा विरेन्द्र आफ्नो घर आएको सम्झिदै राजेश हमालले सार्वजनिक गरे यी दुर्लभ तस्वीर सहित..हेर्नुहोस्।